Go'aan ka qaadista maahan waxa ay ahaan jirtay - Codadka Shaqaalaha Galmada VIC
You are here: Bogga ugu weyn / Articles / Go'aaminta Maaha Sidii ay ahaan jirtay
Go'aaminta Maaha Sidii ay ahaan jirtay
Go'aan ka gaarista waxaa lagu qeexaa iyadoo laga saarayo sharciyada ciqaabta isla markaana lagu xukumayo warshadaha jinsiga isla sharciyada iyo xeerarka khuseeya ganacsiyada kale iyo adeeg bixiyaasha. Haddii ay jirto hal shay oo dhammaan dhaqdhaqaaqa xuquuqda shaqaalaha galmada ay isku raacsan yihiin waa in shaqada galmada la xukumo. In kasta oo aanu qofna weligiis sheegan in ka saarista sharciyada dambiyada ee ka dhanka ah shaqada jinsiga qaangaarka ay tahay xabad sixir ah haddana waxaa jira is afgarad buuxa iyo caddeyn ah in ay tahay tallaabada ugu horreysa ee lagama maarmaanka u ah shaqaalaha galmada inay helaan marinno isku mid ah oo dadka u oggolaanaya shaqooyinka kale ee sharciga ah inay helaan sinnaan iyo caddaalad.
Dhaqdhaqaaqa xuquuqda shaqaalaha galmada waxay dejiyeen sharci-dejin 1970s / 80s. Waqtigaas waxaa nagu adkaatay inaan helno macluumaad. Gail Pheterson '' Xaqiijinta Xuquuqda Dhillooyinka 'iyo' Dhillooyinka: Nolosheena 'oo uu qoray Claude Jaget ayaa keenay fikrado cusub iyo warar ku saabsan falalkii ugu horreeyay ee dhillayaasha ee UK, Jarmalka, Faransiiska iyo meelo kale iyo sidoo kale koontooyinka xabsiga sida dhillooyinka Nevada iyo gobolka horrid waxay ka shaqeeyaan 'xarumaha Eros' Jarmalka. Moodooyinkaas gobolka ayaa u oggolaaday xoogaa shaqo galmo ah qaar waa xaalado aad loo nidaamiyay oo shaqaaluhu aysan wax xuquuq ah ku lahayn iyagoo dambi ka dhigaya dhammaan shaqaalaha kale ee galmada. Hubinta caafimaadka ee qasabka ah ayaa sida caadiga ah lagu soo rogay sharciyeyn. Qof walba wuu argagaxay. Baahida loo qabo in la kala saaro shaqada galmada ee sharciyeynta iyo sharci darrada deg deg ah ayaa diiradda la saaray. Waxay ahayd mid muhiim ah in la horumariyo fikradaha ku saleysan xuquuqda ku-meel-gaadhka ah iyo in si joogto ah loogu dhigo meesha ugu sarreysa ee ajandayaasha galmada ee adduunka iyo gudaha.
Xaaladdayda, mahadsanid COVID, maxalliga ah waxaa loola jeedaa gobolka Victoria ee Australiya oo ku saabsan xakamaynta shaqada galmada ka dib soddon sano oo sharci-darro masiibo ah. Waan shaqeeyay, wax bartay oo waxaan ahaa halgamaa halkaan ilaa 1989 sidaa darteed waxaan u maleynayay inaan sidoo kale ku qarashgareyn karo xiritaanka taageerida shaqaalaha galmada si loo aqoonsado 'sharciyada ganacsiga caadiga ah' ee ay tahay inay ku khuseeyaan warshadaha galmada ee xun. Khalad weyn. Xaaqitaanka buur xeerar ah oo daboolaya qorsheynta, caafimaadka iyo badbaadada shaqada, xaaladaha shaqada, aalkolada, xayeysiinta, iwm iwm iwm (iyo I run ahaantii celcelis ahaan iwm) in la helo 'qawaaniinta ganacsiga ee caddaaladda ah' ee u shaqeeya shaqaalaha galmada ayaa ah mid daalo iyo niyad jab leh. Laakiin waxaa taas ka sii darrayd, markii aan hoos u galno qaab dhismeedka sharci dejinta ayaan si dhaqso leh ugu garaacnay dhagax.
Waxaan bilaabay fuulitaanka buurta qawaaniinta anigoo eegay xeerarka khuseeya ganacsiyada la midka ah. Xeerarka khuseeya goobaha jimicsiga ama rugaha caafimaadka waxaa laga yaabaa inay khuseeyaan dhillayaasha waaweyn. Kuwa khuseeya timajarayaasha iskii u shaqeystayaasha, tababarayaasha shaqsiyadeed ama xisaabiyeyaashu waxay khuseeyaan shaqaalaha galmada ee gaarka loo leeyahay. Waxaan raadinayaa sharciyo aan u baahnayn dadka ka shaqeeya galmada inay magacyadooda ku qoraan diiwaanka. Waxaan raadinayaa xeerar samayn doona goobo shaqo oo nabdoon isla markaana xakamayn doona sida ay madaxyadu ula dhaqmaan shaqaalaha galmada. Waxaan raadinayaa xeerar raqiis ah oo sahlan in la waafajiyo. Waxaan raadinayaa qawaaniin aan si khaldan loogu isticmaali karin mas'uuliyiinta bixiya oo fuliya rukhsadaha. Ma helayo. Ugu dambayn aniga ayaa igu waabariistay. Waqtiyada ayaa isbadalay.
Sanadka 2020 qaabdhismeedka sharciyeed ee waddan hodan ah sida Australia wuxuu ubaahan yahay ganacsade kasta iyo adeeg bixiye inuu dalbado tiro wareer ah oo rukhsad iyo rukhsad ah; in la bixiyo ujrooyin kala duwan iyo canshuuro; in la diiwaangeliyo magacyadooda meelo kala duwan loona hoggaansamo shabakad xeerar ay ka mid yihiin u oggolaanshaha gelitaanka maamulka si loo baaro loona dhaqan geliyo xeerarkaas. Qofna ma baxo tan. Qaar ka mid ah sharciyadan isku dhafan ayaa khuseeya haddii aad tahay warshad weyn oo injineernimo ama timo jare iskiis u shaqeysta oo ka shaqeeya guriga. Qaarkood waxaa sameyn kara 'dadka aan dabiiciga aheyn' sida shirkadaha laakiin badankood waxay u baahan yihiin magaca sharciga ah ee 'qof dabiici ah'. Inta badan codsiyada iyo ogeysiisyada waxaa lagu sameyn karaa khadka tooska ah, taas oo macnaheedu yahay xogtu inay joogto tahay, la isku daray lana xaqiijin karo.
Markii 'qaabeynta' la dejiyay waxaan gudaha ku jirnay sigaar. Kamaanaan xidhnayn suumanka gawaarida waxaanan dhex geli karnaa bangiyada oo aan ku furaynaa koonto magac kasta oo aan rabno. Cidina kama ooyaynin 'cajalad cas' ama 'caafimaad iyo badbaado' maxaa yeelay way yaraayeen. Had iyo jeer waxaa jiray xeerar iyo diiwaanno iyo hubinta iskutallaabta, laakiin xog ururinta analogga ah iyo xajinta ayaa qaali ah oo xadidan. Isla mar ahaantaana waan ogahay in wixii aan burburin ay yihiin shaqaalaha galmada inay si cad u diidaan inay u hoggaansamaan shuruucda ku lug leh u huray sirta iyo madaxbanaanidooda. Sidoo kale kalsooni darradoodu kuma haysato ilaalinta macluumaadka dawladda.
Marka sidaa darteed waa la igu tuuray aniga oo ogaanaya in taariikhdu ay soo koobtay farqiga u dhexeeya 'sharciyeynta' iyo 'decriminalization' qaabkan. Maaddaama Maggie McNiell tiri, 'waxa aan halkaan ku aragno waa wax ka yar arrin gaar ah oo galmo-shaqo ah iyo in dowladdu ay sii ballaadhinayso faragelinta dhammaan nolosha dadka iyo arrimaha gaarka ah. Laakiin taasi waa raaxo qabow kuwa marka hore la bartilmaameedsanayo maadaama daalimiintu ay ballaarinayaan gaaritaankooda. '
Marka la eego meesha 'xukumaynta' xaq ugu fadhiistaan ​​halka ugu sarreysa ajandaha xuquuqda shaqaalaha jinsiga ma jirto dhiirigelin badan oo dib loogu eegi karo ujeedodeeda ujeedo iyo suurtagal ahaan in la cusbooneysiiyo. Way fududahay in la dalbado sharciga ciqaabta in laga saaro oo aan mugdi ku jirin xeerarka 'cadaaladda ah' ee ay tahay in lagu dabaqo ka dib marka la galiyo shaqada galmada. Xaaladdan oo kale, dariiqaas fudud ayaa khatar ah.
Articles Go'aaminta, baaritaannada caafimaadka, xeerarka, Shaqada Galmada